Tag: mividy | Martech Zone
Ahoana ny famahanana ny marketing dizitaly ao amin'ny corong-varotrao
Alahady 28 Febroary 2021 Alahady 28 Febroary 2021 Douglas Karr
Rehefa manadihady ireo vavam-pivarotana ny orinasa, ny ezak'izy ireo atao dia ny mahatakatra tsara kokoa ny dingana tsirairay amin'ny dian'ny mpividy mba hamantarana hoe inona no paikady azon'izy ireo ahatanterahana zavatra roa: habe - Raha toa ny marketing dia afaka manintona vinavina kokoa dia azo inoana fa ny fotoana mety. hampitombo ny asan'izy ireo dia hitombo raha tsy miovaova ny tahan'ny fiovam-po. Raha lazaina amin'ny teny hafa… raha manintona vinavina miisa 1,000 miaraka amin'ny dokambarotra aho ary manana fiovam-po 5%
Mofomamy amin'ny "intelligence" mankany amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny Internet
Talata, Martsa 21, 2017 George Leon
Ny fampielezan-kevitra "drive to web" maoderina dia mihoatra ny fanosehana fotsiny ny mpanjifa mankany amin'ny pejin-tranonkala mifandraika. Izy io dia mampiasa teknolojia sy rindrambaiko marketing izay mivoatra hatrany, ary mahatakatra ny fomba hamoronana fanentanana mavitrika sy manokana hamokatra valiny amin'ny tranonkala. Fiovan'ny fifantohana Tombony iray ananan'ny masoivoho mandroso toa an'i Hawthorne ny fahaizana mijery tsy amin'ny analytics ihany, fa koa mandinika ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny sy ny firotsahana. Ity dia
Marketing havaozina: Maninona ianao no tokony hampifanaraka ny fizarana marika amin'ny fampahavitrihana sy fanaovana tatitra
Alakamisy, Jona 19, 2014 Mpitsara Graham
Miaraka amin'ny angon-drakitra avo lenta noforonina tamin'ny fantsom-barotra marobe, ny marika dia atambatra mba handamina sy hiasa ny fananana angon-drakitra marina hanamafisana ny fahombiazan'ny fantsona. Mba hahalalana bebe kokoa ny mpihaino kendrenao, hitondrana varotra bebe kokoa, ary hampihenana ny fako amin'ny marketing, mila ampifanarahinao amin'ny fizarana nomerika sy ny fanaovana tatitra ny fizarazaran-marikao. Tsy maintsy ampifanarahinao amin'ny antony mividy ny (mombamomba ny mpihaino) ny antony (zavatra niainany) sy ny fomba (fampahavitrihana dizitaly) mba hahafahan'ny rehetra mividy an'izany.